[कथा] सुसाइड नोट
१७ मंसिर २०७२ बिहीबार
प्रत्येक बिहान म उनको साथी हुँ, कफीका लागि । उनलाई थाहा छ म कफीको पारखी । मेरो जिस्कने बानी नै उनको मन पर्ने बानी रे † यदि उनी बूढी नभएकी भए वा मेरै उमेरकी भए मसँगै विवाह गर्थिन् रे ! कुनै दिन ठट्टा गर्दा यस्तै भनेको याद छ ।
म एउटा फोटोमा त्यसै अडिएँ । उनी भन्दै गइन्, “लन्डनको किङ्स कलेजमा हामी सहपाठी । म त्यतिबेला १९ वर्षकी थिएँ होला, ऊ पनि त्यस्तै उमेरको । जब छुट्टी हुन्थ्यो, कहिले उसको रुममा त कहिले मेरो रुममा हामी समय बिताउँथ्यौँ । त्यो पलको सम्झना गर्‍यो भने म विचलित हुन्छु ।” उनी यसरी भावुक बनिन्, यादैयादले उनका आँखा रसाएजस्तो भयो । फेरि भनिन्, “हामी तीन वर्ष सँगै भयौँ । छुट्टीमा रहर पुग्दो गरी हाम्रो शारीरिक सम्बन्ध हुन्थ्यो । मुड चल्नेबित्तिकै सुरु हुन्थ्यो हाम्रो सम्बन्ध । ” अलिकति उनी लजाइन्, यो उमेरमा त्यो उमेरको सम्झना गरेर ।
सेतो लत्रेको सारीमा एउटा पुरुषलाई चुम्बन गरेको फोटो देखाइन् र भनिन्, “ऊ मेरो पहिलो हजबेन्ड । ऊसँग करिब चार साल सँगै भयौँ र डिभोर्स भयो । ऊ जर्मनीको हो ।”
त्यसपछि पार्टीका केही तस्बिर देखाइन् । र, अन्त्यमा त्यस्तै उमेरको अर्को पुरुष देखाई भनिन्, “यी योचाहिँ पोर्चुगीस हो । रेल्वे टेक्निसियन । लरेन्जरसको पार्कमा भेटेको । स्विमिङ पुलमा दुवै जनाको चुम्बनको तस्बिर देखाई थाहा छ ! ऊ राम्रो पौडीबाज पनि हो ।” बूढीआमा यसै जोसिइन् ।
त्यसपछि यो एपार्टमेन्टमा उनी एक्लै हो । बूढाले एउटा कुकुर पालेका थिए रे ! उमेरले दुई वर्षको फरक भए पनि स्वास्थ्यको हेक्का राख्थे रे ! बिहान कुकुरलाई र आफू मर्निङ वाकबाट आएपछि बूढीले एकाएक ब्रेडमा बटर हालेर टेबलमा राखिदिन्थिन् रे ! बूढाले ‘स्विटी’ भनेर बोलाउँथे रे ! ‘आऊ सँगै खाऔँ’ भन्थे रे ! उनले टेबल देखाइन् र ‘अहिले यो टेबल देख्नेबित्तिकै उसकै याद आउँछ’ भनिन् ।
चाउरिएका गालामा खण्डखण्ड हुँदै आँसु चुहिए । अनुहारभरिका खाल्डाखुल्डी मानौँ खेतमा पानी लगाउने कुलोजस्तो छ, जुन आँसुले भरिएर मुखसम्म आइपुग्थ्यो । मैले नजिकै रहेको टेबलबाट टिस्यु पेपर उनको हातमा थमाएँ । काठको मूढो उचाले जसरी गह्रँुगो गरेर टिस्यु पेपर उठाएर आँसु पुछिन् । “छोरो भन्नु नै त्यस्तै भो, एउटी छोरीले कति भ्याउने ? उसका पनि छोराछोरी छन्, अफिसियल काम छ र सँगै उसको लोग्ने । फोन त गरिरहन्छे तर वर्षको एकपल्ट भेट्न आउँछे ।” छोरीको व्यथा सुनाइन् । उनलाई अमेरिका जान मन पर्दैन रे ! हुर्केको नै यही ठाउँ, बूढाको याद पनि यहीँ छ, त्यसैले । बर्बराइन् ।
एकदिन एनिमल सर्भिसको गाडी आयो । एउटा टोकरीजस्तो पोकामा केही सामानहरू लिएर गएजस्तो लागेको थियो । मैले बूढी आमाको ढोका ढकढकाएँ, ढोका खुलेन । सधँै मेरो रुममा आएर कफीको अफर गर्ने बूढी अचानक दुई दिनदेखि गायब छिन् । किन होला ? मलाई कौतूहल जागेको थियो ।
यति लामो समयसम्म बस्दा पनि मलाई उनको मोबाइल नम्बर थाहा थिएन । यी बूढीआमा किन पो आवश्यक पर्लिन् र आखिर घरमा त भेट भइहाल्छ क्यारे, मैले त्यति महत्त्व सोचिनँ । तर, केही दिन नदेख्दा अचानक बूढीप्रति माया स्नेहजस्तो भयो मलाई । उनलाई देख्न नपाएको दुई दिन भएको हुँदो हो । मेरो मन खिन्न र भारी भयो । सायद ‘ट्ेरजेडी’ परेजस्तो, जसको सामना युवावस्थामा गरेको थिएँ मैले कुनै पलमा ।
मेरो घरको तलपट्टिको मासु बेच्ने टर्किससँग सोधेँ एक दिन । उसले भन्यो, “ल तिमीलाई थाहा छैन बूढीको बिरालो खै के कारणले हो मर्‍यो, त्यसै दिन बूढी विह्वल भएर चिच्याएकी थिइन्, त्यसको राती एम्बुलेन्स आएर बूढीलाई लगेको देखेको थिएँ मैले ।” म छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ । मैले चिनेको एक जना प्रहरी अधिकृत थियो, प्राय:जसो म बस्ने घरबाट पाँच मिनेटको दूरीमा रहेको एउटा
बियर क्याफेमा बेलुकी–बेलुकी ऊ आउँथ्यो र फुटबल हेर्दै एक–दुई क्यान बियर पीएर जान्थ्यो ।